မြန်မာနိုင်ငံမှကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန် - Myanmar National Trade Portal
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန်နယ်မြေမှထွက်ခွာသောအခါ ကုန်စည်များကို မြန်မာနိုင်ငံမှတင်ပို့သည်ဟု မည်ပါသည်။ စီးပွားဖြစ်တင်ပို့ခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သော တင်ပို့ခြင်းတို့ပေါ်မူတည်၍ တင်ပို့ရာတွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမတူညီပါ။ (ခရီးသွားတစ်ဦးအနေဖြင့်သယ်ယူလာသော တစ်ကိုယ်ရည်သုံး အရေ အတွက်နည်းနည်းဖြင့်အဝတ်အထည်၊ ဆေးလိပ်နှင့် အရက်များသည်စီးပွားဖြစ်သယ်ယူခြင်း မဟုတ်သည့် အတွက် အကောက်ခွန်နှင့် အခွန်အခများကင်းလွတ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့ခြင်းများကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထိန်းကျောင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ပို့ကုန်အပေါ် စည်းကြပ်သည့်အခွန်အခများကို ကောက်ခံခြင်းနှင့်တွက်ချက်ခြင်းများအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထို့ပြင် ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ် သောဥပဒေအရ စည်းကြပ်ထိန်းကျောင်းခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှကုန်စည်များတင်ပို့ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက် မည့်အသိအမှတ်ပြု ကုမ္ပဏီအဖြစ် ဦးစွာလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ပြီး၊ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ် ပါသည်။ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် အသေးစိတ်ကို ဤနေရာ တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့်နိုင်ငံခြားသီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနအောက်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြား မှုဦးစီးဌာန(DICA), တွင်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ရပါ မည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (OSS) တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနတွင် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရမည်။ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းသည် ၅ နှစ်ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ကြေး ၂၀၀၀၀၀ ကျပ်နှင့် online ဝန်ဆောင်ခ ၃၀၀၀ ကျပ်အား ပေးသွင်းရ မည်။ (သမဝါယမအသင်းလီမိတက်ကုမ္ပဏီများသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ရန်ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ရမည်။ သမဝါယမအသင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သက် တမ်းအပေါ် သမဝါယမဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ထောက်ခံချက်ဖြင့် အများဆုံး (၅)နှစ် သာခွင့်ပြုပါမည်။ မှတ်ပုံတင်ကြေးမှာ သက်တမ်း (၁)နှစ်အထိ ၅၀၀၀၀ ကျပ် ၊ (၂ ) နှစ် အထိ ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်၊ (၃ ) နှစ်အထိ ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် ၊ (၃ ) နှစ်အထက်မှ (၅ )နှစ်အထိ ၂၀၀၀၀၀ ကျပ် နှင့် Online ဝန်ဆောင်ခ ၃၀၀၀ ကျပ်အားပေးသွင်းရမည်။)
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI) သို့လည်း အသင်းဝင်ရပါမည်။. Top.
မြန်မာနိုင်ငံသည် အချို့သောသတ်မှတ်ကုန်စည်များ တင်ပို့မှုကိုတားဆီးထားပါသည်။ တားဆီးထားသော ပို့ကုန်များ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သိရှိရန် ဤနေရာ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။WTO ၏ GATT ၊ ပုဒ်မ ၂၀ နှင့် ၂၁ တွင် လူ၊ အပင်နှင့်တိရိစ္ဆာန်၏ ကျန်းမာရေးနှင့်အသက်ကို ခြိမ်းခြောက် စေတတ်သော၊ ပြည်သူ့အသက်အိုးအိမ်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သောပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ဥပမာ - လက် နက်ပစ္စည်းများနှင့် ခဲယမ်းမီးကျောက်များ ၊ ယင်းနှင့်အလားတူပစ္စည်းများတင်ပို့မှုကို တားဆီးခွင့်ပြုထား သည်။ GATT ၏ ပုဒ်မ ၂၀ နှင့် ၂၁ တို့နှင့်အညီ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ် ရေးဦးစီးဌာနသည် အောက်ဖော်ပြပါပို့ ကုန်တင်ပို့ခွင့်မပြု သည့်ကုန်စည်များကို ၁၇-၈-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၉/၂၀၂၀ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာ ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်-
(ခ) ရေနံစိမ်း (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၁၉၉၉ တွင် ရေနံ)
(ဃ) ဆင်၊ မြင်း နှင့် ရှားပါးတိရိစ္ဆာန်များ
(င) လက်နက် ခဲယမ်းမီးကျောက်
မိမိမသေချာသောအမျိုးအမည်များဖြစ်ခဲ့ပါက စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက် ရှိကုန်သွယ်မှုဌာနခွဲသို့ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။Top. __________________________________________________________
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် လက်ရှိတွင် ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းများ အတွက် ပို့ကုန်လိုင်စင်လိုအပ်ချက်ကို ဖြေလျော့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ သို့သော် ကုန်စည်အချို့တင်ပို့ရာတွင် ပို့ကုန်လိုင်စင်ရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပို့ကုန်လိုင်စင်လိုအပ်သည့်ကုန်စည်လိုင်းများကို အောက်ပါ Link များတွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသည် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် လိုင်စင် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသည့် ဌာနဖြစ်ပါသည်။ ပို့ကုန်လိုင်စင်များကို ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသည့်အခါတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ပေးသော ထောက်ခံ ချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပို့ကုန်လိုင်စင် အတွက် အခကြေးငွေကောက် ခံခြင်းမရှိပါ။
မျိုးစေ့များ၊ အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ဓါတ်မြေဩဇာ
သစ်ခွဲသားနှင့်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ၊ အိုဇုန်း လွှာကိုပျက်စီးစေသော ဓါတုပစ္စည်းများ၊ ဓါတ်သတ္ထု ပစ္စည်းများ၊ ဆိုဒီယမ်ဆာရင်နိုက်
သွားတိုက်ဆေး၊ မာကျုရီ၊ ဆေးဝါး ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းများ၊ ဆေးဝါးပစ္စည်း ကိရိယာများ၊ စားသောက် ကုန်များ (pre-packaged food) ၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများ၊
ရေထွက်ပစ္စည်းများ(အရှင်၊ အသားလွှာ များအပါအဝင်) နှင့် ငါး/ပုဇွန် မွေးမြူရေးအစားအစာနှင့်ဆေးဝါးများ
ထိန်းချုပ်ဓါတုပစ္စည်းများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး နှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများ
တယ်လီကွန်မြူနီကေးရှင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ ယာဉ်များ (ရေယာဉ်နှင့်လေယာဉ်များ)
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်လုပ်ငန်း တာဝန်များအားလုံးအတွက် FOB Incoterm ကို အသုံးပြုပါသည်။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည်ပို့ကုန်ဆောင်ရွက် သည့် ဈေးနှုန်းကိုစိစစ်ခြင်း၊ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန့်ကျင်သော ပို့ကုန်ဆောင်ရွက်ခြင်းများအပေါ် ပို့ကုန်လိုင်စင်ငြင်းပယ်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းများအတွက် TradeNet2.0 online system https://www. myanmartradenet.com/ ကိုထူထောင်ထားရှိပြီး online ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိပါ သည်။ https://www.myanmartradenet.com/ တွင် လိုင်စင်လျှောက်ထား ရာတွင်ဆောင်ရွက်ရန်လမ်း ညွှန်များ ( User Guide ) ကိုလည်း ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသည် လက်ရှိတွင် နယ်စခန်းများ၌ ပို့ကုန်လိုင်စင်လုပ်ငန်းစဉ်များ အတွက် Border Trade Online System (BTOS) ကို ကျင့် သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်လိုအပ်သည့် ကုန်စည်များစာရင်းကို နှစ်စဉ်သုံးသပ်၍ဖြေလျော့ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
လိုအပ်သော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ၊ ပါမစ်များ (သို့) ပို့ကုန်ထောက်ခံချက် အစရှိသည်များ
( ၁) တင်ပို့မည့်ကုန်စည်သဘာဝအပေါ်မူတည်၍ တင်သွင်းမည့်နိုင်ငံ၏လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ၊ ပါမစ်များ(သို့)ပို့ကုန်ထောက်ခံချက် များကို သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ (သို့) အဖွဲ့အစည်းများထံမှရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။
(၂) ပို့ကုန်များသည်တဖက်သတ်အခွန်သက်သာခွင့်ပေးခြင်းများကိုလည်း ခံစားရယူနိုင်ပါ သည်။ ပို့ကုန်တင်ပို့ရာတွင် အာဆီယံ AFTA (သို့) အခြားသော ASEAN Plus FTAs များအောက်မှ အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်များရရှိရန်အတွက် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်ကိုရယူရမည့် ကုန်စည်များလည်းရှိပါသည်။ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ များအကြားချုပ်ဆိုထားသော AFTA အပြင် အခြားသောလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီ ချက်များဖြစ်ကြသည့် အာဆီယံ-ကိုရီးယား၊ အာဆီယံ-ဂျပန်၊ အာဆီယံ-အိန္ဒိယ၊ အာဆီယံ-တရုတ်၊ အာဆီယံ-သြစတြေးလျ-နယူးဇီလန်၊ အာဆီယံ-ဟောင်ကောင်နှင့် ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူစာချုပ်တို့လည်းရှိပါသည်။ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်ရယူရ ခြင်းကို paper-based နှင့် web-based နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံများအလိုက် ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့်ပုံစံ စုစုပေါင်း (၁၁) မျိုးရှိပါသည်။ သက်သေခံလက်မှတ်ပုံစံနှင့် လျှောက်ထားရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကို ဤနေရာ တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
(၃) ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်မရှိသော ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်များ ကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှု လက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ညီနောင်အသင်း အဖွဲ့များ၏ထောက်ခံချက်များအပေါ် ဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ပို့ကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းသည် လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်နေ့မှ ၃ လ သက်တမ်းရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၃ လ သက်တမ်းပြီးလျှင် ပို့ကုန်တင် ပို့သူသည်လိုင်စင်ကို ၂ လ သက်တမ်းတိုးနိုင်ပါသည်။ ၂ လ သက်တမ်း အပြင် နောက်ထပ် ၁ လ ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးနိုင်ပါသည်။ လိုင်စင်သက်တမ်း ၆ လ ပြီးလျှင် ပို့ကုန် လိုင်စင်အသစ်ကို ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက် လိုင်စင် ကြေးပေးဆောင်ရန် မလိုပါ။ပို့ကုန်လိုင်စင်ပြင်ဆင်ချက်များကို ကုန်များသင်္ဘောမတင်မီ အထိပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ပို့ကုန် လိုင်စင်ပြင်ဆင်ကြေးများကို ဤနေရာ တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ အလိုအလျောက်စနစ်
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည်မြန်မာ့အလိုအလျောက်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းခြင်းစနစ် (MACCS) ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ Automated Cargo Clearance System ဖြင့် အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာ များပြား လှစွာသောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းစနစ်တွင် အသုံးပြု သူမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကုန်စည်ရှင်းလင်းခြင်း၊ cargo စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်း၊ နည်းပညာအချက် အလက်နှင့် helpdesk ဟူ၍ပါဝင်ပါသည်။ MACCS သည် သင်္ဘောလိုင်း၊ လေကြောင်းလိုင်း၊ ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်၊ ဂိုဒေါင်ဆောင်ရွက်သူ၊ Customs brokers များ၊ တင်ပို့/ တင်သွင်းသူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများသို့ ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ MACCS ကို ရန်ကုန်၊ မြဝတီ၊ မူဆယ်၊ ချင်းရွှေ ဟော်တို့တွင် တပ်ဆင်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ MACCS သည် National Single Window ၏ အခြေခံလည်း ဖြစ်ပြီး၊ အခြားသောအစိုးရဌာနများ အဖွဲ့အစည်းများမှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်၊ တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင့်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် အတည်ပြုချက်/ငြင်းပယ်ချက်များကို MACCS မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းစနစ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှစတင်၍ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ MACCS သည် တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်လုပ် ငန်းစဉ်များ အတွက် အချိန်ကိုသိသာစွာလျော့ချနိုင် ပါသည်။ Top.
လူ၊ တိရိစ္ဆာန်၊အပင်နှင့်အစားအစာ ပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်ကြောင်း လိုအပ်ချက်
တင်ပို့လိုသောကုန်စည်သည် အပင်၊ တိရိစ္ဆာန်၊ အစားအစာပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်ကြောင်း စစ်ဆေး ထောက်ခံချက်လိုအပ်ပါက ၎င်းကုန်စည်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရပါ မည်။ ဤ website တွင် ကုန်စည်များအတွက် အသေးစိတ်လိုအပ်ချက်များကို Commodity Search စာမျက်နှာရှိ ရှာဖွေသည့်နေရာမှ ဝင်ရောက်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနနှင့် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် SPS measures နှင့် ဆက်စပ်သောကိစ္စများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော SPS စံချိန်စံညွှန်းများ သည် CODEX, ASEAN နှင့် OIE တို့မှ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်းဖြစ် ပါသည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက်များ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ကို Procedures page စာမျက်နှာတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Top.
အချို့သောကုန်ပစ္စည်းများအတွက် နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်းလိုအပ်ချက်များဖြင့် ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်လိုအပ် ပါသည်။ ဤနည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကို သုတေသနနှင့်တီထွင်စမ်းသစ်မှုဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ခံဌာန အဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ တင်ပို့မည့်ကုန်စည်များအတွက် တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ သက်ဆိုင်ရာ competent authorities မှ စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါက တင်ပို့သူများသည် ၎င်းကုန်စည်များအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ကုန် သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ ကုန်သွယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာအတားအဆီးများ သဘောတူညီချက်ပါ လိုအပ်ချက်အရ TBT Enquiry Point ကို တည်ထောင်ထားပါသည်။ TBT Enquiry Point နည်းပညာစံ ချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပတ်သက်သော မေးခွန်းများရှိပါက TBT Enquiry Point တွင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Top.
ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာများစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
၁ ။ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာများစစ်ဆေးမှုများကို အကောက်ခွန်မှ ဦးစီးဆောင်ရွက်ပါသည် ။ ဤသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သော CUSDEC-2 Export Declaration Form ပါ၀င်ပါသည်။ ထို့အပြင် CUSDEC-4 Customs Valuation Form ပါ၀င်ပါသည်။
၂ ။ အခြားလိုအပ်သောသက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများမှာ
(ည)အခြားလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ၊ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်များ (ဥပမာ- ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံ လက်မှတ်များ၊ အစားစာနှင့်ဆေးဝါးများထောက်ခံချက်များ)
၃။ ယေဘုယျအားဖြင့် အကောက်ခွန်ကြေညာလွှာများနှင့် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကို အကောက်ခွန်ဌာနသို့ ကုန်စည်မတင်ပို့ခင် ဆောလျင်စွာတင်ပြလျောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ Top.
၄။ ကုန်စည်များကို ကမ္ဘာ့အကောက်ခွန်အဖွဲ့အစည်း မှ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ဂဏန်း ၈ လုံး အထိ စည်းဝါးညီအကောက်ခွန်စနစ်ကိုကျင့်သုံး၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန် အမည်ပေးစနစ်သည် အာဆီယံ၏ အကောက်ခွန်စည်းဝါးညီအမည်ပေးစနစ်ဖြင့်လည်း လိုက်လျော ညီထွေဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အကောက်ခွန်နှုန်းများကို Myanmar Tariff Classification နှင့် Tariff rates တို့ကိုဖော်ပြထားသောဤ website ပေါ်ရှိ Commodity Search မှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ တင်ပို့မည့်ကုန်စည်ကို မှန်ကုန်စွာခွဲခြားတင်ပြ ရန်မှာလည်း တင်ပို့သူ၏တာ၀န်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ မိမိမသေချာသော ကုန်စည်များအမျိုး အမည်ကိုခွဲခြားမှုမပြုနိုင်ခဲ့လျှင် မြန်မာ့အကောက်ခွန်ဌာန သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျ အားဖြင့်ကုန်စည်၏ အကောက်ခွန်တန်ဘိုးတွက်ချက်နှုန်းမှာ ပစ္စည်း အပေါ်မူ တည်၍ ထိုပစ္စည်းမှာလည်း အရောင်းစာချုပ်ထဲတွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ကုန်စည်တန်ဘိုး တွက်ချက်ရန် မသေချာပါက မြန်မာ့အကောက်ခွန်ဌာနသည် Article7တွင်ဖော်ပြထားသည့် General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947) တွက်ချက်နည်းနှင့်ကိုက်ညီသောအခြားတွက်ချက်နည်း (၅) မျိုးကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ Top.